Home News Madaxweyne Waare oo maanta gaaray Magaalada Beledweyne
Madaxweyne Waare oo maanta gaaray Magaalada Beledweyne
Wafdi uu hoggaaminayo Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Maxamed Cabdi Waare ayaa maanta waxa ay gaareen magaalada Beledweyne, halkaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyay.
Waare oo wafdigiisa oo ay ka mid yihiin Wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka ayaanan si dhab ah loo ogeyn sababta ka dambeysa inay gaaraan magaalada Beledweyne.
wararka soobaxaya ayaa waxa uu soo sheegayaan in Madaxweyne Waare iyo xubnihii la socday loo galbiyay xarunta UN-ka uu ku leeyahay degaanka Ceel Jaalle, islamarkaana aanu gudaha u gelin magaalada.
Sababta uu tagay magaalada ayaa lagu sheegay in ay tahay xalinta dhibaato ka taagan maamulka gobolka Hiiraan oo dhowr jeer isbadel lagu sameeyay.
Previous articleDEG DEG; qarax xoogan oo ka dhacay Magaalada Muqdisho
Next articleAskari katirsan Ciidamada Dowladda oo ruux shacab ah ku dilay Gobolka Shabeellaha Dhexe
Xil-Jeesoow”waxyaabaha BFS ka dhacay Mas’uuliyad ayeey yeelanayaan mana ka aamuseeyno”